Jamie Bell ajoina Wagner Moura mune akateedzana "Shining Vasikana" | Ndinobva mac
Jamie Bell ajoina Wagner Moura mune akateedzana "Shining Vasikana"
Iyo nyowani yeApple TV + akateedzana "Shining Vasikana," yakavakirwa painovhurwa naLauren Beukes, ichave nemutambi mutsva-ane zita anojoinha aripo Elisabeth Moss uye Wagner moura. Moss achatamba mutori venhau (Kirby) anotambura noutsinye. Moura achatamba Dan, mutori wenhau achivhara kurwisa uku, uye Bell achatora chinzvimbo chaHarper, asinganzwisisike akasurukirwa ane kubatana kunoshamisa kuna Kirby.
"Kupenya Vasikana" kunoonekwa se nguva yekufananidzira yekufambisa inonakidza maererano inoverengeka yezita rimwe chete nemunyori Lauren Beukes. Nyaya inotenderera pamurume asina pekugara kubva kuChicago Kushungurudzika uyo anowana kiyi yeimba yakavhurwa panguva dzakasiyana munhoroondo yeguta reNorth America. Nekudaro, kuti ufambe nepasuo, unofanirwa kuenda kuuraya vakadzi vakasiyana
Chicago, 1992. Vanoti izvo zvisingauraye zvinokusimbisa. Regai vataure Kirby Mazrachi, ane hupenyu hwakashandurwa mushure mekuyedza kuuraya. Sezvo iye achinetseka kutsvaga iye anomurwisa, shamwari yake chete ndiDan, aimbova mutapi wenhau aiponda akabata nyaya iyi uye anoedza kumudzivirira kubva pakurara kwake. Kirby zvaanoenderera mberi mukuferefeta iye akawana vamwe vasikana vakapondwa. Humbowo hwemhosva idzi… hazvigoneke. Asi kune musikana anofanira kunge akafa, hazviite hazvireve kuti hazvina kuitika ...
"Kupenya Vasikana" ndiko kubheja kwaApple kwazvino takabatana neMRC Terevhizheni. Parizvino hatina zuva rekuburitsa kana kunyangwe kutanga kwekugadzirwa. Asi chinhu chinoita sekunge chatotora inertia uye zvinoita kunge chisingamire ne Jamie Bell kubatanidzwa. BAFTA Award anokunda anonyanya kuzivikanwa nebasa rake pa "Rocketman" kana "Billy Elliot" achaita chinzvimbo chaHarper.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Jamie Bell ajoina Wagner Moura mune akateedzana "Shining Vasikana"
Iyo AirPods Pro nemutengo wakaderera chaizvo
Sei maemail ese asingaonekwe muMail uye nekuigadzirisa sei